Go'an Taariikhi Ah: Madaxda Dalka Finaland oo ogolaaday inay ku biiraan NATO
HomeWararka CaalamkaGo’an Taariikhi Ah: Madaxda Dalka Finaland oo ogolaaday inay ku biiraan NATO
Go’an Taariikhi Ah: Madaxda Dalka Finaland oo ogolaaday inay ku biiraan NATO
May 13, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Finland, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
TT (Markku Ulander/Lehtikuva via AP)
Go’aan taariikhi ah, madaxweynaha Finland Sauli Niinisto iyo ra’iisul wasaare Sanna Marin ayaa sheegay in Finland ay soo gudbineyso codsi ku aaddan ka mid noqoshada ururka NATO oo aan dib u dhac lahayn.
” Xubinnimada NATO waxay xoojin doontaa ammaanka Finland ,” Marin ayaa ku tiri war-saxaafadeed ay soo saartay wax yar ka hor . Finland waxay sidoo kale ka shaqayn doontaa xoojinta isbahaysiga difaaca. Finland waa inay codsato xubinimada NATO iyadoon daahin. Waxaan rajeyneynaa in la qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si go’aankan loo qaato maalmo gudahood.”
Maalinta sabtida ayaa xisbiga haya talada dalka Finland ee Socialdemokraterna waxa uu ku dhawaaqi doonaa mowqifkiisa rasmiga ah ee ku aadan xubinimada NATO.
“Ku dhawaaqida madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha waa la filayay,” weriyaha SVT ee Finland Hasse Svens ayaa yiri. Inta badan Finnishku waxay taageeraan xubinnimada NATO, laakiin xiisadda u dhaxaysa waddammada ayaa sidoo kale la filayaa inay sii korodho. Waxa kale oo jira walaac ku saabsan gardarrada Ruushka